Sharpspring: A Comprehensive na Ọnụ Ahịa Ahịa na Ahịa akpaaka Platform | Martech Zone
SharpSpring jikọtara akpaaka azụmaahịa na CRM na otu njedebe njedebe njedebe emebere iji bulie azụmaahịa gị. Ihe ngosi ha bara ọgaranya nwere ihe niile ịchọrọ na ihe ndị ọzọ maka inbound sales & marketing automation: email dabere na omume, nyocha mkpọsa, peeji ọdịda dị ike, onye na-ewu blọgụ, usoro mgbasa ozi mmekọrịta, ọgụgụ isi ọgụgụ isi, CRM & akpaaka ahịa, ụdị nrụpụta siri ike, ịkọ na nchịkọta, ID onye ọbịa na-enweghị aha, na ndị ọzọ.
Ndị SMBs na ụlọ ọrụ Enterprise na-eji ikpo okwu ahụ, mana ndị ahịa kachasị nke SharpSpring bụ ụlọ ọrụ dijitalụ n'ihi na ha na-enye mmemme reseller / white-label nke ghọworo ụlọ ọrụ uru maka ihe karịrị ụlọ ọrụ dijitalụ 1,200 gburugburu ụwa. Ha na-enye atụmatụ ole na ole, gụnyere ihe ngosi mara mma, njikwa ọtụtụ ndị ahịa, ntinye aka na ndị ọzọ.
Anyị ji Act-On na HubSpot tupu anyị na SharpSpring aga. Ihe nyiwe abụọ ndị ọzọ dị mma, mana SharpSpring nyere anyị ohere ịchịkwa ndị ahịa anyị karịa gbasara mmekọrịta, ịgba ụgwọ, na atụmatụ atụmatụ.
Atụmatụ SharpSpring gụnyere
email - Kwụsị agwụ agwụ, uka email blasts, na-azọpụta oge gị ahịa azum. Bido mkparịta ụka nke na-eduga na ntụgharị na ozi ahaziri iche na mkpọsa akpaghị aka na-azaghachi omume onye ọrụ. Jiri SharpSpring email ahịa n'elu ikpo okwu soro na-eduga “mgbe ịpị.” N'adịghị ka ndị ọzọ na-enye ọrụ email, anyị na-enye nyocha zuru ezu na mmekọrịta ọ bụla - yabụ ị nwere ike izipu ozi ziri ezi na oge kwesịrị ekwesị, ma zipụ ndị otu ahịa gị ka ha rụọ ọrụ na ọkwa oge.
iche - Mee, hazie, ma hazigharịa ubi na-enweghị nsogbu site na ndị nchịkọta na-edetuo-na-dobe editọ. Dynamicdị ike anyị na-emechabeghị ebe a mara amara maka ndị ọbịa ama ama ka ọ dịkwuo mma ntụgharị ma yie ọfụma na saịtị ọ bụla nwere CSS. Nwere ike ịdepụta mpaghara site na ndị ọzọ na ụdị nke atọ.
Automation - Onye na - ewu ihe na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ na - ahụ maka ihe eji eme ihe na - eme ka akpaghị aka na - eme ngwa ngwa. Jiri mgbanye uche iji tinye aka na isi ihe dị mkpa na njem ịzụ ahịa ha pụrụ iche. Ozugbo mekọrịta ozi na ụlọ ọrụ anyị na-ere ahịa CRM. Tọọ onye zụrụ ahịa gị maka ngwa ahịa na ọrụ gị, nyezie gị onye ọrụ dị iche iche ka ị nwee ike izipu ozi ezubere iche maka akpaghị aka. Nata ndepụta nke kachasịsi ike kwa ụbọchị na-eduga na igbe mbata gị, ma rụọ ọrụ naanị n'oge kwesịrị ekwesị iji gbanwee ha na ahịa. Jiri ngwa ngwa azụmaahịa nke SharpSpring iji akara akara na-adabere na njikọ aka, nsuso peeji, kwesịrị ekwesị, na ndị ọzọ - ha na-ebute oke mbibi ndu oge.
Identmara ndị ọbịa - VisitorID bụ otu n'ime ihe nzuzo nzuzo na ngwugwu anyị na-ere ngwa ngwa akpaaka. Jiri ya iji chọpụta ọnụọgụ abụọ nke ndị ọbịa na saịtị gị (ma e jiri ya tụnyere nyiwe ahịa asọmpi). Jiri nsuso nke dabeere na omume na-aghọta nke ọma ihe na-akpali pịa ọ bụla. Chọpụta isi ihe mgbu na atụmatụ ga-aga nke ọma ka weebụsaịtị gị wee kwụsị ịkwụsị. Nata ndepụta nke kachasị sie ike n'ụbọchị na-eduga na igbe mbata gị, ma rụọ ọrụ naanị n'oge kwesịrị ekwesị iji tọghata ndị ahụ na ahịa.
CRM - Ihe omuma bu ike - ma CRM bu ahia. Jiri ahia akpaaka anyị CRM ma ọ bụ jikọọ na-enweghị ọnụ jikọrọ CRM gị na-eweta ọrụ na SharpSpring ahịa platform. Debe data agbakwunyere iji mee ka mmekọrịta na ụzọ abụọ ozugbo. Sochie ohere site na okike iji mechie anya nnụnụ banyere pipeline gị. Mepụta usoro nkwekọrịta omenala, ubi, nzacha, na ndị ọzọ, iji jikwaa ahịa na-enweghị isi site na iji ngwaọrụ akpaaka ahịa anyị.
Ibe akwukwo - Wụpụta peeji ọdịda dị ike na ọdịda peeji nke na-agbanwe ndị ọbịa ka ha duga. Jiri nchịkọta akụkọ dị mfe na-pịa mepụta peeji ọdịda dị iche, ma ọ bụ mezie ndebiri site n'ọbá akwụkwọ sara mbara anyị. Melite agbụ nke njikọ ọdịda peeji iji hazie ndị ọbịa n'ime ọwa dị iche iche. Wụgharịa ntụgharị na ọdịnaya weebụ dị ike nke na-agbanwe dabere na ọdịmma na njirimara ndị ọbịa. Nyefee nsonaazụ ngwa ngwa na-enweghị nzuzo ma ọ bụ onye nrụpụta, yana na-enweghị imetụ weebụsaịtị gị aka - mana maka ndị chọrọ njikwa zuru oke, ịnwere ike ịgbakwunye HTML nke gị na koodu CSS iji hazie ibe ọbụlagodi.
Blọọgụ - Bipute a blog na nkeji ya na onye na-ewu blọgụ na editọ na ahịa akpaaka usoro. Chepụta, jikwaa ma bipụta akwụkwọ na ịdị nfe. Mepụta mmekorita n'ime otu gị, ma ọ bụ mepụta profaịlụ ịnabata ndị na-ede blọgụ ọbịa. Gbakwunye iru nke ọdịnaya gị site na iji ozi RSS RSS nke na - eziga ozi na - akpaghị aka na listi nzipu ozi gị na - akpaghị aka. Inwekwu iru nke ọdịnaya gi site na iji wijetị na-elekọta mmadụ na-enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta ma soro gị n'ịntanetị. Jiri ngwa ngwa ngwa ahịa nke SharpSpring iji soro ndị ọbịa, chọpụta nke ọdịnaya na-arụ ọrụ kacha mma, ma lekwasị anya na posts iji bulie ntụgharị.
Nchịkwa Ahịa - Mee mkpebi dị mkpa site na data ziri ezi ma dị mkpa. Họrọ usoro kachasị mkpa maka mkpọsa na ozi ọ bụla, wee mepụta akụkọ ọdịnala iji nyochaa arụmọrụ gị. Ghọta ngwụcha ngwụcha ROI na soro ụzọ ndu - ọbụlagodi site na anọghị n'ịntanetị. Soro ndị otu gị, ndị ahịa, na ndị ahịa kerịta ozi dị mkpa na ngosipụta enwere ike ịgụta ma nweta ya.
Mmekọrịta - Jikọọ na ọtụtụ narị ndị na-eweta ngwanrọ nke atọ na SharpSpring's APIs na njikọta Zapier. Mekọrịta data na ngwa ahia gị CRM sistemụ, debe sistemụ njikwa ọdịnaya gị ka emelitere, ma jikọta ụdị web na ndị ọzọ yana nyiwe ahịa anyị. N'ezie mee SharpSpring nke gị site na ịmegharị ozi ịntanetị, ọkwa, akụkọ, na ngwa ahụ n'onwe ya. Chekwaa data na ebe anyị zoro ezo, nke dị nchebe, na nke enwere ike ịba.
Social Media - Gaa karịa mbipụta, usoro ihe omume, na nlekota. Gbanwee mmekorita nke ndi mmadu ka ha buru mkparita uka bara uru nke na emeputa ahia ma gosiputa na akuko ahia gi. SharpSpring Social na-enye atụmatụ niile ị na-atụ anya site na ngwọta njikwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, tinyere ngwaọrụ ntụgharị dị ike ị nwere ike ịnweta site na ikpo okwu ahịa zuru oke. Na-akpali akpaghị aka workflow na akara na-elekọta mmadụ dabere na mmekọrịta, isi mmalite, ọdịmma na ndị ọzọ. Tụọ ROI end-to-end nke njikọta ọnụahịa mgbasa ozi ma gosipụta uru nke mbọ mgbasaozi mmekọrịta gị.
Nweta ngosi SharpSpring
ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ SharpSpring ma na-eji njikọ njikọta isiokwu a.
Tags: APIikpo okwu blognjikwa mmekọrịta ndị ahịaemail Marketingformsnchịkọta ahịaakụrụngwa ahịaahịa akpaaka n'elu ikpo okwunkọtọna-elekọta mmadụonye mgbasa ozi na-elekọta mmadụnjirimara ndị ọbịa